Uphengululo: 'Abantu beBarge' Ngaba yiMryky Murant Mutant Monster Movie-iHorror
Ikhaya Iindaba ezothusayo zoLonwabo Uphononongo: 'Abantu beBarge' Ngaba yiMryky Murky Mutant Monster Movie
Uphononongo: 'Abantu beBarge' Ngaba yiMryky Murky Mutant Monster Movie
by UJacob Davison Agasti 13, 2020
ibhalwe ngu UJacob Davison Agasti 13, 2020
Ngenxa yeziganeko zangoku kwi-2020, uninzi lwethu kalusizi kwafuneka lubeke i-kibosh kwizicwangciso zethu zehlobo. Ngaba kukutyelela usapho, ukuya emitshatweni, okanye ukuthatha nje uhambo oluya kwilizwe. Kodwa ukuba imovie eyoyikisayo isifundise nantoni na, ukuhlala ehlotyeni kunokukhokelela kwintlekele… okanye okubi ngakumbi. Esi sisiseko se-british back-river horror of Abantu beBarge.
Ibali lilandela oodade ababini, uKat (Kate Davies-Speak) noSophie (Natalie Martins) njengoko begqibe kwelokuba bachithe iholide yeempelaveki kunye namakhwenkwe abo abeka uMark (uMark McKirdy) kunye nosomashishini ongathandekiyo, uBen (Matt Swales) kwi Ilizwe laseBritane. Ukuthatha isigqibo sokurenta isikhululo seenqanawa kwaye uthathe uhambo olucothayo, oluthandana ngemilambo ye-backwoods, i-quartet izifumana ingquzulana nabanye bendawo abanomsindo ...
Abantu beBarge yi-movie eyoyikisayo yase-UK evela kwi-2018 kodwa ekugqibeleni yabetha i-Stateside. Ngumcimbi wohlahlo-lwabiwo mali oluphantsi ukuze uqiniseke, kodwa uyonwabisa. Ukuyibukela, imovie ine-aura yokuthe ngqo kwividiyo eyoyikisayo bhanyabhanya kunye nee-slasher ze-1980's. Nokuba amakhadi etayitile kunye nokulandelelana kwamatyala baqhayisa ngobuhle ngaphandle kokuxhomekeka kuwo kakhulu. Okubonakala ngakumbi kwi-synth, amanqaku exesha lomqambi uSam Benjafield, elona nqaku liphezulu kwimveliso. Ibali ngokwalo kukuphosa ngokuqinisekileyo kwiimovie ezinje Iinduli zinamehlo kwaye I-Texas Chainsaw Massacre kodwa ngokujija ngokucacileyo i-Bhritane kwaye inezinto ezithile eziguqulwe ziintlanzi eLovecraftian endaweni yeentaba zeentaba kunye ne-rednecks.
Ibali lincinci ngamanani kwaye abalinganiswa bathe tyaba, banikwe, kodwa Abantu beBarge unikezela kumasebe asebenzayo e-fx. Ukuphila ngokubhanyabhanya kwimiboniso bhanya-bhanya yexesha elidlulileyo ikhupha i-CGI encinci. Ukunika isixa esaneleyo segazi elibomvu elinamathelayo elityatyekwe kumaxhoba nakwiskrini. Ke ngokuqinisekileyo zizinto ezibizwa ngokuba yiBarge People. Iimbumba ezothusayo zentlanzi ezenziwa yityhefu eyityhefu kunye neekhemikhali ezingcolisa iindlela zamanzi zalapho. Nangona bengenamphefumlo, kunye neetrenchcoats kunye neehuku zabo banikezela ngesuntswana Hellraiser vibe. Ngelishwa, akukho namnye ngokwenene onika uhlobo lwe-gravitas okanye charisma ukusinika 'i-Pinhead'-esque lead killer, kodwa iFX kunye noyilo zilungile ngokwaneleyo.
Abantu beBarge ayisiyiyo eyona yoyikisayo yenyama kwaye mhlawumbi ubunokusebenzisa ubunzulu obungaphezulu. Njengoko benditshilo, abalinganiswa abacabaleleyo, kunye nesiqwenga somgaqo. Kodwa ngenxa ye-gorehounds kunye nabantu abafuna nje ukuzonwabisa, elula, inqaku lesidalwa, uloyiko oluguqukayo, le yewotshi eyonwabisayo. Kananjalo okuninzi kokungadibani kodwa ukuseta imo kubulala okungahleliwe kwaye kudlule ngamaxhoba ukongeza nje imizimba eyongezelelweyo kunye nesibindi apha naphaya. Ngelishwa, ukukhutshwa kwevidiyo yasekhaya kunamathambo angenanto. Akukho zixhobo zikhethekileyo kwi-DVD / Blu-Ray. Nditsho nendlwana erhuqwayo. Imuvi kunye nemibhalo engezantsi. Yiyo lento. Kukho isiliphu esigqibeleleyo, kodwa oko kuninzi njengoko ufumana.
Okwangoku, ukuba ukwimo yesikolo esithile esingenangqondo, esidala, ukuzonwabisa okumangalisayo ngexabiso elinomtsalane, yiba nepenti kwaye uthathe iflothi Abantu beBarge.
Abantu beBarge ibetha i-VOD, iDVD, kunye neBlu-Ray nge-18 ka-Agasti ka-2020.
2020BaseBrithaniIziloReviewUkuzonwabisa kweRLJabantu barge
BUKELA: 'Iinwele ezimbi' zikaJustin Simien ziwisa i-Teaser ngaphambi kweHulu Debut